Qaxooti Suuriyaan ah oo quuluubta dadka Canada soo jiitay - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka LINDSAY COULTER
Image caption Ibrahim Halil Dudu marka uu caruusadda caawinayay Canada oo dhanba wuxuu joogay afar maalmood oo kali ah
Ma jirto caruusad jecel in ay waji gabax la kulanto maalinta aroos keeda: Jo Du ayuuse ka halaabay siibkii taashkii ay u soo xiratay xalfadda arooskeeda.
Inkastoo aysan ogayn Jo hadana meesha ma oolin wax ay ka walbahaarto.
Sababtoo ah albaabka ku xiga waxaa joogay harqaanle, maalmoo uun ka hor yimid Canada kaddib markii uu ka soo qaxay colaadda ka taagan Suuriya laakiin eray Ingiriis ah kuma hadli karin.
Ibrahim Halil Dudu oo ah ninka harqaan laha ah ayaanse ka labo labaynin in uu badbaadiya caruusadda.
Gurigii uu aroosku ka socday ayuu soogalay isaga oo wata boorsadii ay ugu jireen dunta iyo irbadda isaga oo ay weheliyaan wiilkiisa oo yar iyo David Hobson oo ah nin reer Ontario ah oo shaqsiyan isagu qayb ka mid ah gurigiisa si mutadawacnimo ah ugu wareejiyay Ibraahim iyo qoyskiisa si ay hoy uga dhigtaan.
Daqiiqado gudahoodna Jo ayuu u hagaajiyay siibkii ka halaabay isaga oo ka dhigay sidii lagu soo iibiyay oo kale.
Image caption Ibrahim markiisii hore Xalab ayuu ka soo qaxay
Lindsay Coulter oo sawir qaade ka ahayd arooska ayaana sawirro ka qaaday
Lindsay oo 26 jir ah ayaa aad u jeclaysatay wixii ay indhaheedu qabteen, facebook ayayna asxaabteeda kula wadaagtay, 22,000 oo ruux ayaana jeclaysatay sawirkaas oo dareenkooda soo bandhigay.
Waxay sheegtay in wixii intaas ka dambeeyay ay usoo dhacayeen email-lo iyo taleefoonno ka soo gaarayay dad doonaya in ay wax badan ka ogaadaan harqaan laha Xalab ka soo qaxay oo Suuriya joogay saddex sano isaga oo dib u dajin halkaas ku sugayay.
Xaqiiqadu waxay tahay in sama falidda sheekadan ay sii horaysay: Ibrahim, xaaskiisa iyo saddex carruur oo ay dhaleen ayaa ka mid ahaa 50 qoys oo uu Canada geeyay ganacsade Jim Estill oo damaanad qaaday dhaqaalaha ku baxaya qoysaskaas si ay Canada ugu noolaadaan.